६९ प्रतिशतले बढ्यो राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नाफा : कति कमायो ? यस्तो छ वित्तीय विवरण - Arthatantra.com
६९ प्रतिशतले बढ्यो राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नाफा : कति कमायो ? यस्तो छ वित्तीय विवरण
काठमाडौ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ६२ करोड ८५ लाख २१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको लेखा परिक्षण नभएको वित्तीयविवरण (अपरिष्कृत)ले यस्तो देखाएको हो ।
बैंकको गत आवको सोही अवधिमा ३७ करोड १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । गत वर्षका तुलनामा यो वर्ष बैंकको नाफा ६९प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
यस अविधमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी बढेर १ अर्ब २१ करोड ३३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा खुदब्याज आम्दानी ७१ करोड ९७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
बैंकको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीयविवरण अनुसार यस अवधिमा बंैकको सेयर पूँजी २ अर्ब ८६ करोड ९ लाख ३० हजार सहित ५९ अर्ब ४५ करोड ४३ लाख ७२ हजार निक्षेप संकलन गरी ३३ अर्ब ११ करोड ७४ लाख७८ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ । त्यस्तै बैंकको जगेडा कोषमा ९१ करोड ३४लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
हालदेशका ७७ वटै जिल्लाका सबै प्रकृतिका सहकारी संघ/संस्थाहरु गरी १३ हजार २ सय ८ वटा भन्दा बढी सदस्यहरु रहेका छन । बैकको एक वटा केन्द्रीय कार्यालय सहित ७ वटै प्रदेशमा६८ वटा शाखाकार्यालय मार्फत आफ्ना सदस्यहरुलाई सेवादिई रहेको छ ।
आफ्ना सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई दिने सेवामा संधै अब्बल रहेको बैंकले नाफामा पनि आक्रमक रुपमा वृद्धि गरेको बैंकका अध्यक्ष के.बी उप्रेतीले बताउनुभयो ।
बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १५ प्रतिशतले लाभाशं वितरण गरेको थियो । बैंकमा कारोबार गर्ने सदस्य सहकारी संघ÷संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को प्रावधान अनुसार बचत र कर्जा कारोबार गर्ने १२ हजार ४६ वटा सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट रकम समेत बाँडफाँड गरिसकेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाँईले जानकारी दिनुभयो ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १४ मंगलवार १७:४० मा प्रकाशित
अघिल्लाे बजेटमा ब्रोकरको सुझाव : लगानीकर्ताले झेलेको क्लोज आउटदेखि रेमिट्यान्स पुँजीबजारमा भित्र्याउनेसम्म
पछिल्लाे महामारीको बीचमा पनि पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास झनै बढ्यो : गभर्नर अधिकारीको विचार